The game comprises of only one major Slots UK Bonus which can be triggered by landing at least three scatter on the reels. ထိုနောက်မှ, the reels with the scatters are made to spin and their positions will then reveal the number of spins you will be awarded. Add the respective numbers given by the reels because that will determine the total spins which will be awarded to you.
Big မကောင်းပါ Wolf က
LucksCasino.com အဆင့်၏ ProgressPlay လီမိတက်ကလုပ်ကိုင်နေသည်3(suite ကိုအဘယ်သူမျှမ. 1258), မျှော်စင်စီးပွားရေးစင်တာမှ, မျှော်စင်လမ်း, Swatar, Birkirkara, BKR 4013, မော်လ်တာ. ProgressPlay မော်လ်တာအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် (C58305), ကြောင်းလိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မော်လ်တာဂိမ်းအာဏာပိုင်အားဖြင့်၎င်း, တစ်ဦး Class ကိုအောက်မှာလည်ပတ်နေသည် 1 အပေါ်4လိုင်စင် [16 ဧပြီအပေါ်ထုတ်ပေးအရေအတွက်ကို MGA / CL1 / 857/2012 2013] & [အရေအတွက်အား MGA / CL1 / 957/2014] 19 ဧပြီအပေါ်ထုတ်ပေး 2014 & [16 ဒီဇင်ဘာလအပေါ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် / 1141/2015 အရေအတွက်ကို MGA / CL1 2015]; and is licensed and regulated by the ဗြိတိန်လောင်းကစားကော်မရှင်, License Number 000-039335-R-319313-009. ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေတစ်ဆင့် wagering ဗြိတိန်ပုဂ္ဂိုလ်များဗြိတိန်လောင်းကစားကော်မရှင်ကထုတ်ပေးလိုင်စင်အပေါ်မှီခိုအတွက်ဒါလုပ်နေတာ. လောင်းကစားစွဲလမ်းနိုင်ပါတယ်. တာဝန်သိ Play.
အွန်လိုင်းကာစီနို | £ 500 ငွေပွဲစဉ်အပိုဆု